Sirdoonka Faransiiska oo isbadal loogu baaqay - BBC Somali
Sirdoonka Faransiiska oo isbadal loogu baaqay
Image caption Weeraradii Paris kaddib sirdoonka Faransiiska aad ayaa loo dhaliilay
Sirdoonka Faransiiska ayaa u baahan in dib u qaabayn lagu sameeyo weeraradii argagixiso ee magaalada Paris ka dhacay sanadkii hore awgeed, sidaa waxaa ku taliyay guddi baarlamaan oo baaritaan sameeyay.
Gudigaasi waxay sheegeen in loo baahan yahay in la isku dhafo qaybo badan oo hal hay’ad laga dhigo.
Hogaamiyaha gudigaas Georges Fenech ayaa soo bandhigay gudi la mid ah xarunta argagixiso la dagaalanka Maraykanka ee heer qaran.
Labadii weerar ee dhacay bishii January iyo November oo dilay 147 ruux ayaa horseeday dhaleecayn loo soo jeediyay jawaab celinta laamaha ammaanka.
Gudigaasi waxaa kale oo ay dhaleeceeyeen xukuumadda Belgium oo ay shageegeen in ay ka gaabisay hor istaagida Salax Cabdisalaam oo ka qayb qaatay weerarkii bishii November. Markii dambese waxaa bishii March lagu xiray magaalada Brussels.
Dhanka kalana gudigaasi wuxuu ogaaday in xukunkii dagdaga ahaa ee la soo rogay weerarka kaddib in uu isbadal kooban ku soo kordhiyay ammaanka.
6,000 ilaa 7,000 oo ciidan ah ayaa ka hawlgala Faransiiska kuwaas oo qayb ka ah talaabooyinka ammaanka sare loogu qaadayo si ay u ilaaliyaan, Iskuulada, macbadyada Yuhuudda iyo xarumaha kale ee xasaasiga ah.